Gam akporo M na-elekwasị anya na igodo 6 dị mkpa | Gam akporosis
Igodo isii maka gam akporo M
N'oge a Google I / O 2015 na-ewere ọnọdụ na ọkwa nke gam akporo M na ihe niile a preview ga-apụta na a ga-ahapụ ya n'oge na-adịghị anya. A preview nke gam akporo M ka ndị mmepe nwee ike ịkwadebe maka mgbanwe ndị na-adọrọ mmasị dịka ohere nke ịnye onye ọrụ ọrụ nke ụfọdụ ikike mgbe ha ga-eji ya nke mbụ.
Otu n'ime atụmatụ ndị a ka egosipụtara n'ụzọ zuru oke na ngwa WhatsApp. Oge ị malitere igwe okwu iji ya, mpio mmapụta ga-apụta na-arịọ maka mmeghe nke mmewere na ikike. Rollingchịkwa ikikere ngwa bụ otu n'ime igodo isii anyị ga-ekwu ntakịrị n'elu, tupu ịnwe ozi niile maka ụbọchị ndị na-esonụ. Gam akporo M bụ ebe a.
1 Sundar Pichai na-eweta gam akporo M
1.1 Akwụkwọ ikike
1.2 Omenala taabụ maka Chrome
1.3 Direct njikọ na ngwa
1.4 android Ṅaa
1.5 Onye na-agụ mkpịsị mkpịsị aka
1.6 Njikwa batrị ka mma na USB Type-C
Sundar Pichai na-eweta gam akporo M
Sundar Pichai mara ọkwa gam akporo M na-elekwasị anya na igodo isii: ikikere ngwa, ahụmịhe weebụ, ngwa njikọ, Akwụmụgwọ Android, nkwado ihe mkpịsị aka nkwado na njikwa batrị ka mma.
Kedu anyi amaghi n’oge bu aha ohuru nke gam akporo M, na anyị bụ otu ihe ahụ dị ka afọ gara aga na Google I / O gara aga mgbe ọ bụ naanị amaara gam akporo L.
Google choro buru uzo di ukwu na uzo a y nye onye ọrụ ahụ mmetụta na ha nọ na njikwa zuru oke na ikikere ngwa na ikpo okwu n'efu. Ugbu a, mgbe anyị malitere ngwa ọ jiri ikike pụrụ iche, ọ ga-ajụ anyị ma anyị chọrọ ime ya.
Ndị a ikikere nwere ike gbanwee site na ntọala nwere ndepụta nke ga-enyere anyị aka ịgbanwe ngwa ndị anyị chọrọ iji, dịka ọmụmaatụ, igwe okwu. Egwuregwu na-adọrọ mmasị nke Google maka gam akporo M.
Omenala taabụ maka Chrome
Ngwa ugbu a ga-enwe ike itinye mgbakwunye taabụ Chrome. Nke a abụghị naanị maka M na n'etiti ya omume ọma ga-abụ nnọọ ngwa ngwa loading nke lashes. Na ngwụcha, ọ ga-agba mbọ ịnye ahụmịhe ntanetị kacha mma site na ngwaọrụ mkpanaka.
Direct njikọ na ngwa
Ihe omuma atu doro anya nke gosiputara ojiji nke ihe ngosiputa nke ngwa. Anyị na-enweta njikọ na Twitter site na email wee pịa ya ka ọ mepee ngwa Twitter n’enweghị gafere ngwa ahọpụtara dị nnọọ ka ọ na-eme ugbu a na nsụgharị gam akporo ndị gara aga.
A arụmọrụ na ga-anọ na nsụgharị ndị ọzọ nke gam akporo site na 4.4 Nke ahụ ga-apụta ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa na ekwentị na-enweghị nsogbu gbasara mgbanwe na oge furu efu. Ma o nwere ọtụtụ ihe ị ga - eme na arụmọrụ ndị ọzọ nke gam akporo M, ihe nkwụnye mkpịsị aka ndabara.
Gam akporo M ga-enye nkwado zuru ezu na mkpisiaka agụ ngwaike. A atụmatụ na sonyere ịkwụ ụgwọ maka ekwentị na ike to kpọghee ekwt ngwaọrụ na a na-akpali arụmọrụ na anyị na-ama hụrụ na ọtụtụ ọnụ.
Njikwa batrị ka mma na USB Type-C
Nke a bụ Ihe Google nwere mmasị na ndụ batrị nke ọnụ nakwa na nke a nwere nke kachasị ukwuu. Omume oma na gam akporo M n'echiche a bụ maka ngwa ndị ga-adị n'azụ ga-abanye "ọnọdụ ụra" ka ha wee na-arụ ọrụ site n'oge ruo n'oge maka ihe ndị dị mkpa dịka mkpu. Nke a, dị ka Google si kwuo, ga-apụta okpukpu abụọ nke ndụ batrị. Anyị ga-ahụ ya.
N'ikpeazụ, USB Type-C nkwado. Ihe anyị na-echerịrị ma nke ahụ ga-apụta na anyị nwere ike iji ya kwụọ ngwaọrụ ndị ọzọ. Nwekwara ike ịhọrọ ojiji a ga-enye USB na oge ụfọdụ dị ka egosiri na onyonyo dị n'okpuru.
Google mechaa kọwaa igodo isii nke gam akporo M, kwa O kwuru ụfọdụ nkọwa ọhụrụ anyị ga-enweta dị ka mmelite na nnomi, ịkekọrịta menu na ịnweta kọntaktị, ma ọ bụ ihe ga-abụ njikwa olu ka mma maka ọkwa, mkpu, wdg.
Mmemme nke ka na-eme na nke ị nwere ike ịgbaso site na njikọ a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Igodo isii maka gam akporo M
Juan David Aguilar Blandón dijo
Ha na-ekwukarị mmelite batrị na m nwere lollipop na ọ na-agba ọsọ ọsọ!
Zaghachi Juan David Aguilar Blandon
Ruo mgbe ha doziri ebe nchekwa Memory ... Nke a bụ nsogbu
[APK] Foto Google dị taa nwere nchekwa na-akparaghị ókè n'efu
Google I / O 2015: Taa enwere ike inyefe anyị mkpịsị aka Google ọhụrụ, obere Chrome OS na Chromecast 2.